प्रचण्डलाई भीम रावलको जवाफ– ढलेको होइन, एमाले ढाल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिएको हुँ « Intro Nepal
प्रचण्डलाई भीम रावलको जवाफ– ढलेको होइन, एमाले ढाल्ने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिएको हुँ
Published On : १० श्रावण २०७८, आईतवार १२:५७
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएर आफू स्वच्छ राजनीति र पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार एउटा कार्यक्रममा आफ्नो राजीनामालाई ‘पाँच दलको गठबन्धन फुटाउने खेल’ भनेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । शनिबारै राति सामाजिक सञ्जालमार्फत रावलले प्रचण्डको उक्त भनाइलाई ‘हास्यास्पद र मनगढन्त’ भनेका छन् ।
उनले चारवटा बुँदामार्फत आफ्ना कुरा राखेका छन् । उनले दोस्रो बुँदामा भनेका छन्, “प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएर म ‘ढलेको’ होइन, नेकपा (एमाले)लाई ढाल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको पक्षमा उभिएको हुँ । एमसीसी, नागरिकता, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र अन्य राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रम देउवासँग कुरा गर्ने अवसर नदिई राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर निर्देशन मान भन्नु कुन विधि र गठबन्धन संस्कृति हो ?
उनले तेस्रो बुँदामा प्रचण्डलाई आफूहरुले जस्तै ‘त्याग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ूहामीले सांसद पद मात्र होइन, राजनीतिक भविष्यसमेत दाउमा राखेर प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र देउवाजीलाई प्रम बनाउन योगदान पुर्‍यायौँ । हाम्रो स्थितिमा हुनुभएको भए के प्रचण्डजी हाम्रोजस्तै त्याग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो ?
आफूले स्वस्थ राजनीति र पार्टी एकताको पक्षपोषण गर्दा त्यसलाई नेताहरुबीच फाटो ल्याउने काम ठान्नु विग्रहकारी चिन्तन भएको उनको भनाइ छ । पार्टी फुटाएर देश, जनता र वामपन्थी आन्दोलन कसैको भलो नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले राजीनामा फिर्ता लिइसकेका छन् ।